Puntland: Soo dhaweynta Farmaajo oo Garoowe laga dareemayo
By Wariyaha Garowe , Garowe Online
GAROOWE, Puntland- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa in todobaadka dambe uu yimaado magaalo madaxda Puntland ee Garoowe tan iyo markii la doortay sannadkii hore horaantiisii.
Sida Warsidaha Garowe Online ka ogaaday ilo wareedyo katirsan Villa Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo ayaa Axadda dambe kusoo wajahan caasimadda Puntland.
Wafdi hordhac ah oo isugu jira Xildhibaano iyo xubno katirsan Madaxtooyada ayaa maanta soo gaaray Garoowe, waxaana kusoo dhaaweeyay madax katirsan Puntland iyo wafdi horay u joogay deegaanada Puntland.
Soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa laga dareemaya magaalo madaxda Puntland, waxaana farasa magaalaha iyo waddooyinka muhiimka ah lagu xardhay calanka Soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka Puntland.
Sidoo kale dhalinyaro iskood isu xil-qaamay ayaa baallayaasha ku yaalla bartamaha magaalada iyo goobaha dowladda ku suntay rinji u eg calanka dalka Soomaaliya oo uu ku mataansanyahay kan Puntland.
Arrintan ayaa timid xilli maanta la filyay in wasiirkii Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Cabdi Faarax Juxa, uu yimaado magaalada Garoowe, isagoo horkacaya wafdiga soo gaaray caasimadda Puntland Balse xilka qaadi lagu sameeyay darteed u baaqday.
Farmaajo ayaa la qorshaynayaa inuu kasoo qayb galayo 08 Jannaayo oo ah maalintii la doortay Madaxweyne Gaas, halka la filayo inuu xariga ka jaro mashaariic ay kamid tahay dhismaha Garoonka diyaaradaha Garoowe oo hadda gabo-gabo maraya.
Farmaajo ayaa booqashadiisan noqon doontaa markii ugu horaysay ee uu yimaado Garowe, waxaana uu socod ku mari doonaa qaybo kamid ah gobollada Puntland sida; Nugal, Bari iyo Mudug.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Boosaaso ayaa dib ugu soo laabtay Garoowe galinkii dambe ee maanta.
Gaas: "Wadanku wuxuu u baahanyahay xasilooni siyasadeed"
Puntland 30.10.2017. 23:51
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo ka hadlayay furitaanka...
Maxaa diiradda lagu saarey Shirka Gollaha Wasiiradda Puntland?
Puntland 29.03.2018. 21:22
Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay Qardho
Puntland 10.01.2018. 14:11
Tacadiyada ka dhaca Puntland oo la soo bandhigay [Dhagayso]
Puntland 28.12.2017. 00:42
Puntland: Gaas oo ka hadlay muranka dekedda Boosaaso [Daawo]
Puntland 08.11.2017. 19:30
Puntland: Gaas oo u dhoofay Ethiopia [Daawo]
Puntland 20.11.2017. 15:15
Qarjab: BBC-da waan kula xisaabtamaynaa waxay qortay [Dhagayso]
Puntland 16.01.2018. 17:40
Madaxweynaha Puntland oo u dhoofaya Muqdisho
Puntland 28.10.2017. 10:22
Wararkii ugu dambeeyey
Qaabka DF ugu lug-leedahay kororka awooda Al-Shabaab oo la sharaxay 07.08.2020. 09:55
Dhaxal-sugaha boqortooyadda Sacuudiga oo dacwad lagu soo oogay 06.08.2020. 23:05
Xukuumadda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya oo ansixisay sharci cusub 06.08.2020. 19:25
Maxkamad sii deysay nin 27-sano xabsi ugu jiray dambi uusan gelin 06.08.2020. 19:00
DF Soomaaliya oo loo diray baaq la xiriira doorashooyinka iyo amniga 06.08.2020. 16:00
Sababta uu Farmaajo u saxiixi la'yahay Sharciga Hantidhowrka oo la dusiyey 06.08.2020. 14:00